ललिता निवासमा व्यापारी सुहृदराज घिमिरेको १३ रोपनी जग्गा | Ratopati
सोमबार ६ माघ, २०७६ Monday, 20 January, 2020
ललिता निवास प्रकरण
ललिता निवासमा व्यापारी सुहृदराज घिमिरेको १३ रोपनी जग्गा
सासु, आमा, श्रीमती र बिजनेस पार्टनरका नाममा जग्गा खरिद, आनाको जम्मा ५१ हजार !
personमदन ढुङ्गाना exploreकाठमाडौं access_timeजेठ २४, २०७६ chat_bubble_outline1
बालावुटार अर्थात् काठमाडौंको प्रमुख स्थान । प्रधानमन्त्री निवास सँगैको जग्गा । हरेक कोणबाट सुरक्षित र आकर्षक स्थान ।
तर त्यहाँको जग्गाको मूल्य कति होला ?
अहिले बालुवाटार क्षेत्रमा जग्गा पाइयो भने प्रतिआना कति पर्ला ?
बालुवाटार क्षेत्रमा अहिले कहीँ जग्गा पाएमा पनि प्रतिआना ६० लाख घटी कहीँ पाइँदैन ।
तर बालुवाटारकै जग्गा १३ वर्ष अगाडि कसैले प्रतिआना ५० हजारमै पाउँछ भने नकिन्ने को पो हुन्छ र !
विवादित ललितानिवास जग्गा प्रकरणको पाटो केलाउँदै जाँदा व्यापारी सुहृदराज घिमिरेले ललिता निवासको जग्गा प्रतिआना ५० हजारमै किनेको पाइएको छ ।
व्यापारी सुहृदराज घिमिरेले आफ्नी सासुआमा इन्दु शर्माका नाममा खरिद गरिदिएको करिब १३ रोपनी जग्गामध्ये दुई कित्ता जग्गाको खरिदबिक्री लिखत हेरौं ।
२०६३ साल मंसिर १३ गते इन्दु शर्माले बालुवाटारको दुई कित्ता जग्गा राजीनामा पास गरेर किनिन् ।
तत्कालीन समयको कित्ता नम्बर ११ को १० आना २ दाम जग्गामध्ये ७ आना १ दाम र कित्ता नम्बर १३ को १० आना २ दाम जग्गामध्ये ७ आना २ पैसा जग्गा खरिद गरिन् । दुवै जग्गाको क्षेत्रफल जोड्दा १४ आना २ पैसा १ दाम हुन्छ ।
१६ आनाको एक रोपनी हुने हिसाबले पुग नपुग झण्डै १ रोपनी जग्गा इन्दु शर्माले किनेकी छिन् । यो जग्गा किन्दा उनले ७ लाख २८ हजार २ सय रुपैयाँ तिरेको देखाएकी छिन् । १४ आना २ पैसा १ दाम जग्गाको मूल्य जम्मा ७ लाख २८ हजार देखाउनुको अर्थ तत्कालीन समयमा प्रतिआना जम्मा ५१ हजारमा जग्गा खरिद गरेको देखाइएको छ ।
अब कुरा गरौं बजार मूल्यको ।
अहिले बालुवाटार क्षेत्रको जग्गाको मुल्य प्रतिआना ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । पहिलो कुरा त त्यहाँ जग्गा पाउन नै सकिँदैन भने, दोस्रो जग्गा पाएपनि ६० लाख रुपैयाँभन्दा सस्तो मुल्यमा जग्गा पाउन सकिँदैन ।
२०६३ सालको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यसक्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रतिआना १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी थियो ।
प्रति आना १० लाखलाई आधार मान्ने हो भने पनि इन्दु शर्माले किनेकी उक्त जग्गाको खरिद मूल्य नै १ करोड ४२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ ।
तर इन्दु शर्माले २०६३ साल मंसिर १३ गते उक्त जग्गा जम्मा ७ लाख २८ हजार २ सय रुपैयाँमा खरिद गरेकी छिन् । यसको मतलब उक्त जग्गाको मूल्य प्रतिआना जम्मा ५१ हजार २ सय रुपैयाँमा ।
त्यसैगरी इन्दु शर्माकै नाममा २०६३ माघ २५ गते अर्को १३ आना ३ पैसा जग्गा खरिद भएको देखिन्छ ।
तत्कालीन समयको कित्ता नम्बर २, ३, १०१, ७३ र ७५ गरी ५ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल १३ आना ३ पैसा खरिद गरेकी छिन् इन्दुले ।
बालुवाटार क्षेत्रको उक्त जग्गा पनि उनले प्रतिआना ५० हजारकै हाराहारीमा खरिद गरेकी छिन् ।
हेर्नुहोस्, यो लिखत ।
बालुवाटारको १३ आना ३ पैसा जग्गा इन्दुले जम्मा ६ लाख ८७ हजार ५ सय रुपैयाँमा खरिद गरेकी छिन् ।
अब फेरि अर्को जग्गाको लिखत पनि हेरौं ।
इन्दु शर्माले जग्गा किन्ने र बेच्ने गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।
२०६३ साल मंसिर १३ गते नै इन्दुले व्यापारी पुरुषोत्तम पौड्याललाई बालुवाटारको एक रोपनी ८ आना जग्गा बिक्री गरेकी छिन् ।
तत्कालीन समयको कित्ता नम्बर ८ को २ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दाम जग्गामध्ये १ रोपनी ८ आना जग्गा कन्टिनेन्टल ट्रेडिङका व्यापारिक साझेदार पुरुषोत्तम पौड्याललाई बिक्री गरेकी छिन् ।
उक्त जग्गा ३० लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको छ । आनाको हिसाबले हेर्दा यो जग्गाको मूल्य प्रतिआना १ लाख २५ हजार देखाइएको छ ।
मंसिर १३ गते नै आफूले किन्दा इन्दुले प्रतिआना करिब ५१ हजार तिरेकी छिन् भने विक्री गर्दाको मुल्यचाहिँ प्रतिआना १ लाख २५ हजार लिएको देखाएकी छिन् ।
व्यापारी पुरुषोत्तम पौड्यालले २०६३ साल मंसिर १३ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार सँगैको जग्गा प्रति आना जम्मा १ लाख २५ हजारमा खरिद गरेका छन् ।
अहिले ललितानिवास परिसरमा इन्दु शर्माकै नाममा करिब ३ रोपनी जग्गा रहेको छ । चलनचल्तीको मुल्य हेर्ने हो भने यो जग्गाको मूल्य अहिले २५ करोडभन्दा बढी पर्छ ।
अहिले ललितानिवास परिसरमा इन्दु शर्माकै नाममा करिब ३ रोपनी जग्गा रहेको छ । हाल इन्दुको नाममा ललितानिवासभित्र कित्ता नम्बर ७२, ७३, ७६, १९, २१, १०५, १०७, १०९ र १११ गरी ९ वटा कित्ता जग्गा रहेको छ । यी सबै जग्गाको क्षेत्रफल जोड्दा करिब ४२ आना जग्गा इन्दु शर्माकै नाममा रहेको छ । चलनचल्तीको मुल्य हेर्ने हो भने यो जग्गाको मूल्य अहिले २५ करोडभन्दा बढी पर्छ ।
यी दुवै जग्गा व्यापारी सुहृदराज घिमिरेको जग्गा हो । अहिलेपनि व्यापारी सुहृदराज घिमिरेले सासु, बिजनेश पार्टनर, श्रीमती र आमाको नाममा बालुवाटारमा १३ रोपनी भन्दा बढी जग्गा जोडेका छन्, जसको बजार मूल्य अहिले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।
आफूमाथि कर छली र अकुत सम्पत्ति आर्जनको उजुरी परेपछि घिमिरेले आफ्नी आमा कमला घिमिरेको नाममा रहेको जग्गा भने बेचबिखन तथा सट्टापट्टा गरिसकेको पाइएको छ । यद्यपि अहिले सरकारले छानबिन गरिरहेको ललिता निवासको बाहिरी भागमा भने अझै पनि श्रीमती रेखा शर्मा घिमिरेको नाममा जग्गाजमिन रहेको छ ।
को हुन् इन्दु शर्मा र पुरुषोत्तम पौड्याल ?
इन्दु शर्मा पहिले भक्तपुरकी स्थायी बासिन्दा हुन् । अहिले भने उनको घर मण्डिखाटारमा रहेको छ । उनी व्यापारी सुहृदराज घिमिरेकी सासु आमा हुन् । इन्दुकी छोरी रेखा शर्मासँग व्यापारी घिमिरेले विवाह गरेका हुन् ।
पुरुषोत्तम पौड्याल सुहृदको व्यापार साझेदार
यता ललिता निवासभित्र २४ आना अर्थात् १ रोपनी ८ आना जग्गाका मालिक पुरुषोत्तम पौड्याल व्यापारी सुहृदराज घिमिरेका बिजनेस पार्टनर हुन् ।
व्यापारी सुहृदराज घिमिरेको कम्पनी कन्टिनेन्टल ट्रेडिङमा पौड्यालको २० प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ भने पौड्यालको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा पनि सुहृदको लगानी रहेको छ ।
कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ निर्माण सामग्री तथा मोटर आयात गरी बेच्ने आधिकारिक विक्रेता अर्थात् डिलर हो ।
कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ कोमात्सु कम्पनीको निर्माण सामग्री सप्लाई गर्ने नेपालको आधिकारिक विक्रेता हो । त्यसैगरी कन्टिनेन्टल ट्रेडिङले किया मोटर तथा इसुजु मोटरको आधिकारिक विक्रेताको काम गर्छ भने ओटिस कम्पनीको इलेभेटर र स्कालेटरको पनि आधिकारिक विक्रेता हो ।
घिमिरेका व्यापार साझेदार पौड्याल, अकुत सम्पत्ति लुकाउन ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा रहेको इको बे लिमिटेड नामको अफसोर कम्पनीका पनि शेयरहोल्डर र निर्देशक हुन् । नेपालमा कमाएको अकुत सम्पत्ति र कर छलीको पैसा थुपार्न सुहृदले ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा इको बे लिमिटेड नामको अफसोर कम्पनी खोलेका छन् ।
घिमिरेका व्यापार साझेदार पौड्याल, अकुत सम्पत्ति लुकाउन ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा रहेको इको बे लिमिटेड नामको अफसोर कम्पनीका पनि शेयरहोल्डर र निर्देशक हुन् ।
त्यससँगै सिंगापुरमा पहिले कन्टिनेन्टल ओभरसिज नामको हेभी इक्वीपमेन्ट सप्लाई गर्ने कम्पनीमा पनि सुहृद र पौडेलको लगानी रहेको थियो । अहिले भने त्यो कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी फार इष्ट एसोसिएट्स बनाइएको छ । यही कम्पनीको नामबाट कन्टिनेन्टल ट्रेडिङले कोमात्सु लगायत कम्पनीका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका लागि चाहिने डोजर, लोडर लगायतका सामग्री आयत गर्ने गरेको छ ।
उक्त कम्पनीको कागजी मालिक सुहृदकी भाञ्जी दिप्ती दाहाल भएपनि हस्ताक्षर गर्ने अधिकार भने व्यापारी सुहृदराज घिमिरे र बिजनेश पार्टनर पुरुषोत्तम पौड्यालमै रहेको छ ।
सुहृदमाथि कर छली र अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा
व्यापारी सुहृदराज घिमिरेमाथि अहिलेपनि कर छली गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा छानबिन भइरहेको छ ।
सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले सुहृदको सम्पत्तिबारे छानबिन गरिरहेको छ । नेपाल, सिंगापुर, ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्ड र अमेरिकाका रहेको सुहदको सम्पत्ति तथा त्यसको श्रोतबारे छानबनि भइरहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले बताएको छ ।क़
लामो समयदेखि सुहृदको उजुरीमाथि अनुसन्धान र छानबिन भइरहेपनि विभागले सुहृदमाथि अहिलेसम्म मुद्दा दायर भने गरेको छैन ।
याे पनि पढाै‌
सरकारी जग्गा हडप्न व्यापारीको चलखेल, कौडीको भाउमा उठाइयो ब्याट्री कम्पनीको सम्पत्ति
सरकारी जग्गा हडप्न व्यापारीको यस्तो हर्कत, अदालतमा हाले ५ मुद्दा
June 8, 2019, 5:05 a.m. Shesh Baral
Let's not talk such non-sense. None of the buy/sale transaction is shown in market price in Nepal, let alone the Lalita Niwas! So pointing fingers to one group or person does not make sense. The entire system should be changed!
शिवमायाको १३ बुँदे सम्बोधन : आफ्ना जराहरु नबिर्सियोस्, धरातल नभुलियोस्
दिल्लीबाट फर्किएपछि देउवासँग भेट्ने पौडेलको चाहना: देउवालाई निधिको फोन
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आज ४ बजे, अब ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्ने
नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई ११ बुँदे आचारस‌ंहिता : ओलीलाई सूचना, राज्यलाई कर !
विवाहको मौसममा खुशीयाली थप्दै यामाहा स्यालुटो, ३२ इन्चको टीभी उपहार
छाडा पशु चौपाय व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले ल्यायो कार्यविधि
सिप्रदी ट्रेडिङ्गद्वारा “टाटा दशैं वम्पर लक्की ड्र” उपहार घोषणा
केही मन्त्री लगाम बिनाको घोडाजस्ता भए : रावल
प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटाउन पहल
राष्ट्रियसभामा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक पारित
धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्वमेयर राईको निधन